Ciidamadda Itoobiya iyo Maamulka KG oo u gurmanaya Abuu Mansuur oo ay ku hareeraysan yihiin Alshabaab. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jun 30, 2017
Ciidamo Xooggan oo isugu jira Itoobiyaan iyo kuwa Maamulka Koonfur Galbeed Somalia ayaa u dhaqaaqay Dhinaca Deegaanka Abaal oo 18 KM u jira Degmadda Xudur ee Gobalka Bakool. Waxayna Ciidamadan garab siinayaan Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur oo dhawaan Maraykanku ka saaray Liiska Argagixisadda oo ay hadda ku hareeraysan yihiin Dagaalamayaan Alshabaab ka tirsan oo doonaya inay nolol ku qabtaan Rooboow.
Rooboow oo haysta illaa iyo hadda iyo 80 Maleeshiyaad ku hayb ah iyo Saanad Milatari ayaa ka baxay Halkii uu ka daganaa Deegaanka Abaal oo ay Jiho kasta ka joogaan Maleeshiyaad ka tira badan kuwiisa oo Alshabaab ah. Waxaana uu u ruqaansaday Kayn ku dhow Abaal oo uu horay uga samaystay Dhufaysyo, uguna talagalay inuu ku xeeladaysto haddii la soo weeraro.
Saanad Milatari iyo Qalab kala duwan oo u yaalay Xaruntiisa Abaal ayuu Mukhtaar Rooboow maalmihii la soo dhaafay u daabulanayay Kaynta uu ka samaystay Dhufaysyadda, halkaas oo uu ugu talagalay inuu waqti ka dagaalamo.
Mukhtaar Rooboow oo dhawaan ay Maraykanku ka saareen Liiska Argagixisadda, waxa uu dhawr Sanno ka maqan yahay Kooxdiisa Alshabaab oo ay is khilaafeen Hogaamiyihii dhintay Axmad Godane. Waxaana uu wadahadal kula jiraan Dawladda Somalia, inkastoo uu ku xiray Shuruudo dhawr ah.
Mukhtar Rooboow waxa uu ku xiray ku soo biiritaankiisa Dawladda Somalia Shuruudo ay ka mid yihiin in loola macaamilo inuu ku yimid Heshiis ee uusan isi soo dhiibin, inaan lagu qasbin in loo soo bandhigo Warbaahinta, in la siiyo Xil Siyaasadeed, iyo Qodobo kale.
Maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee Puntland oo xukun ku fulisay 7 ka tirsan Al-Shabaab